Wararka Maanta: Jimco, July 12, 2019-Kismaayo: Wararkii u dambeeyay ee weerarkii hotel Cas-caseey
Ururka al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyada weerarka, waxaana wali gudaha hoteelka ku jira ilaa lix dagaallame oo kooxda ka tirsan,kuwaaso bombaanooyin ku soo tuuraya ciidammada amniga ee ku hareereeysan hoteelka.
Magacyada la aqoonsaday ee ilaa hadda warbaahinta maxalliga ah ay sheegtay inay weerarka ku geeriyoodeen, waxaa ka mid ah suxufiyad caan ah oo bulshada Soomaaliyeed ay xushmeyso, Hodan Naalaye, waxaa kalo la sheegay inuu geeriyooday seygeeda oo la oran jirey Fariid Jaamac oo mar wasiir ka soo noqday Jubbaland. Shaqsiyaadka kale ee la sheegay inay weerarka ku dhinteen waxaa ka mid ah weriye Maxamed Sahal Cumar oo loo yiqiin Gacmadheere, wuxuu ka howlgali jiray telefishinka maxalliga ah ee SBC iyo raadiyaha Qaramada Midoobay ee ka warrama arrimaha bani'aadanimada ee Ergo.
"Ra’iisul Wasaaraha ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab istaagaan ciidadamada Qaranka ee ku howlan soo afjaridda maleeshiyada argagixisada ah." ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ra'iisul wasaaraha.